Axmed Xasan Cawke (AHUN) wuu farabadnaa, kee se ayaad taqaanay? |
Axmed Xasan Cawke (AHUN) wuu farabadnaa, kee se ayaad taqaanay?
Sanadihii bilowgii todobaatanaadkii waxa uu la shaqeyn jirey weriyihii weynaa ee Weli Xaaji Cali oo markaa aad can uguu ahaa tebinta ciyaaraha. Cawke markuu muddo yar wadey tebinta ciyaaraha waxa uu noqdey weriyaha loogu jecelyahay tebinta ciyaaraha.
Wakhtiyadii hore, warbaahinta keli ah ee dalka ka jirtaa waxa ay aheyd raadiyo Hargeisa iyo raadiyo Muqdisho. Labadaa idaacadood ayaa dadka madadaalin jirey warkana laga dhageysan jirey. Heesaha cusub ee soo baxa waxa laga dhageysan jirey labadaa idaacadood. Gaar ahaan waxa jirey barnaamij la odhan jirey “I Maqashii, I Madadaali” oo soo geli jirey qiyaastoo 5ta galabnimo maalin kasta. Barnaamijkaa waxa caan ka dhigay Alla ha u naxariistee Cawke iyo Cabdalla Nuuradiin iyo xakiimo Caalin. Waxay aheyd badhtamihii todobaatanaadkii oo markaa ay socdeen riwaayado aad dalka looga jeclaa oo heeso fiican lahaa oo ay ka mid ahaayeen “Dab Jaceyl kari Waa” “Jini iyo Jaceyl” “Habloyohow hadmaan Guursan Doontaan”. Riwaayadahaasi waxaa ay lahaayeen heeso aad u fiican oo dadku waxa ay sugi jireen barnaamijkaasi si ay u maqlaan qaar ka mida heesahaa iyo kuwa kale ee dadku xiiseeyaan. Heesaha ka sakow, waxa xiiso barnaamijkaa xiiso badan u sii yeeley, hadalada dhex taalka ah ee saddexda weriye ay ku dari jireen. Idaacadaha berigaa waxa looga bartay hadalo toosan oo aan kaftan ku jirin. Balse Cawke iyo Nuuradiin waxa ay ku soo kordhiyeen, kaftan iyo suugaan ay ku ladhaan dalaabaadka. Xakiima Caalin oo la daadihin jirtey barnaamijka, iyana wey la qabsatey oo waxa ay odhan jirtey “Cawke iyo Nuuradiinow, Culimadii jaceylkaay” bal soo daaya waxa ad manta heysaan.
Markii uu sida weyn u can baxay Alla Ha U Naxariistee Cawke, waxa ay aheyd dagaalkii Soomaalida iyo Itoobiya dhex marey 1977 iyo 1978. Waxa uu markaa ahaa weriye sheega warka. Waxa ay aheyd xilli Soomaalidu aad u qiireysneyd oo ay dagaal ku jirtey. Cawke oo lahaa cod aad u reen badan, afsoomaaligana aad uugu fiicnaa, kalsooni badana ka muuqato ayaa marka uu warka sheegayo lagu soo ururi jirey makhaayadaha radiyayaashu yaalaan. Ka sakow xaqiiqda warka ee uu sheegayo, waxa dadku raali ka noqon jireen sida waafiga ah ee kalsoonidu ku jirto ee uu warka u tebin jirey. Warka Cawke waxa uu qeyb weyn ka ahaa dagaalka oo waxa uu u dhigmaayey ciidanka dagaalamaya. Warka waxa uu raacin jirey halkudhegyo uu sameystey oo ay ka mid ahaayeen “Taliska Nafla Caariga ah”, “Taliska Tiisii Dhamaatay, “Taliska Maata Dooxa ah”. Wararka sidoodaba waxa soo diyaariya tafatire. Balse hadana maalinta weriye kale loo dhiibo warku macno muu yeelan jirin oo dadku waxa ay kaga kalsoonaayeen marku Cowke sheegayo oo codkiisa iyo hadalkiisa ayaa u dhigmaayey in la guuleystey. Cawke iyo Alla Ha U naxariistee Abwaan Cabdi Bashiir Indhobuur waxa ay dagaalkaa kaga soo qeyb qaatey codkooda iyo suugaantooda.
Badhtamahii sideetamaadkii oo ay aheyd xiliyadii uu soo baxay Telifishankii Soomaaliya, Cawke waxa uu noqdey weriya aragiisa lawada barto oo dalka oo dhan can ka noqdey. Waxa barnaamijyadiisa lagu xusuustaa kaftan iyo hadalo si furfuran oo niyadsami ku jirto. Ka sakow shaqada idaacadda iyo telefishanka, waxa uu Cawke ku can ahaa bulshada dhexdeeda oo aad loo xiiseyn jirey la joogistiisa iyo wehilkiisa. Xiliyadaa badhtamihii sideetamaadkii waxa soo baxday cajalad aheyd gabayadii silsiladdii “GUBA” oo ay wada duubeen Cawke iyo nin la odhan jirey Lamumbe oo taariikhyahan ahaa. Lamumbe waxa uu ahaa ninka gabayada marinaya, Cawkane wuxu ahaa ninka wareysanayaa ee la macaaneynaya sheekada. Waxa ay noqotey cajalad dalka iyo dibedaba meel kasta lagu dhageysto oo soo koobtay taariikh sanado badan soo socotey.
Inkasta oo an anigu aqaaney, hadana, sanadadii u danbeeyey ee burburkii ka hor ayaan shakhsiyan is baraney AHUN Cawke oo xiligaa uu degenaa xaafad Xamar ku taala oo la odhan jirey “Xamar Bila” dadka qaarna u yaqaaneen If iyo Aaakhiro. Muddo yar ka bacdina waxaaban noqoney isku xaafad oo hal dhisme ayaanu wada degeneyn isaga iyo reerkiisaba xaafad la odhan jirey “African Village”. Waxa guursadey oo ay reer wada sameysteen weriyadii weyneyd ee caanka aheyd Sacdiya Candilaahi Salad.
Markii danbe waxa uu Cawke noqdey weriyaha Madaxweyne Siyaad Barre (AHUN) oo uu shaqadaa hayey ilaa intii ay dawladdu burbureysey. Cawke weligii mucaarid muu noqon oo lama maqal isaga oo dawlad uu la shaqeeyey wax ka sheegaya. Hadana waxa uu ahaa shakhsi ay mucaaridka laftoodu jecelyihiin. Wixii intaa ka danbeeyey waxa uu soo marey guud ahaan dhamaan warbaahinta caanka ah ee Soomaalidu dhageysato ee ay ka midyihiin BBC-da, VoA-da, telefishanka Universal, Telefishanka Horn Cable, Telefishanka Qaranka Soomaaliland.
Maxaa lagu xasuusan karaa Cawke Alla ha U Naxariistee:
1. Alla Ha U naxariistee Cawke waxa uu ahaa qof umadda afka Soomaaliga ku hadasha oo dhami ay jecleyd oo ay u sineyd. Xiliyadan danbe ee Soomaalidu kala yaacdey, dadka waxa lagu amaaradeystaa qabiil iyo gobolo. Balse Cawke waxa lagu amaaradeystaa inu ka taagnaa Soomaali oo dhan meel kasta oo ay joogto. Qofka jooga Jabuuti, iyo ka Burco jooga iyo ka Cadaado jooga iyo ka muqdisho jooga iyo ka Jigjiga joogaa mid kastaa waxa uu u heystey inu Cawke xaafadooda ama reerkooda yahay. Cawke Sida Hargeisa iyo wajaale looga jecelyahay si ka badan ayaa Muqdisho iyo Jawhar looga jecelyahay. Cawke uumuu baahneyn qabiil gaar ah, balse isaga ayaa qabiil ahaa keligii oo lagu biiri jirey. Meeshii Soomaali joogto ee uu tago isaga iskugu mid ayey aheyd oo bulsho ayuu ka dhex sameysan jirey o isagaa lagu biiri jirey.
2. Dadku waxa ay shaqooyinka u galaan manaafacaad iyo lacag iyo mushahar, balse Cawke shaqada weriyenimadu waxa ay kaga jirtey dhiiga oo marna uugumuu jirin hunguri iyo xoolo ku yeelo. Waxan qabaa inu weli weriye uun ahaan lahaa xataa haddaan mushahar la siin. Noloshiisu waxa ay markasta qeyb ka aheyd halkii bulsho joogto.
3. Waxa uu karti u lahaa inaan laga xiiso dhicin oo uu jiil kasta la heysto halka ay wax marayaan. Waxa uu wakhti la soo qaatay oo uu isku dhereriyey weriyayaashii waaweynaa ee caanka ahaa sida Yaasiin xaaji Ismaaciil (AHUN) iyo Cabdi Xaaji Gobdoon. Waxa uu soo wareystey abwaaniintii gobanimo doonka sida Cabdilaahi qarshe iyo Xuseen Aw Faarax. Waxa uu soo wareystey fanaaniintii waaweyneyd sida Maxamed Saleebaan (AHUN) iyo Kuluc (AHUN). Waxa uu weriyenimadiisa halkii u sareysey ka gaadhey 40 sanadood ka hor isagoo da’diisu labaatanka uun inyar kor u dhaftey. Sidaasooy tahay, waxa uu ilaa maanta la heystey halka ay wax marayaan 2015 ka. Marka ad dhageysato wareysiga uu la yeeshey fanaanada Seynab Cige iyo sheekooyinkii dhowr iyo afartan sanadood ka hor, waxa ad moodaa iney meel kuwada noolaayeen oo ay isku jiil ahaayeen. Hadana marka ad dhageysato wareysiyada uu la yeeshey Farxiyo Fiska iyo Ikraan Caraale iyo Fu’aad Cumar Yare, waxa ad moodaa inu yahay jiilkii dhashay sagaashamaadkii sida uu uula heysto sheekada. Cawke waxa uu karti u lahaa inu 4 jiil oo Soomaali oo laga soo bilaabo 1973 ilaa 2015 uu la fal galo oo uu mid walba waayihiisa iyo xamaasadiisa yeesho.
4. Markii dalku burburey, dadka Soomaalida ah niyad jab badan ayaa ku dhacay, waayo warka keliya ee ay dalkooda ka maqlaan waxa uu ahaa dhimasho, abaar iyo dagaalo. Barnaamijyada Cawke waxa ay dad badan oo Soomaalida ah u ahaayeen niyad dhisid oo waxa ay codkiisa iyo hadalkiisa ku xusuusan jireen wakhti hore iyo beri samaad la soo marey. Barnaamijka uu Cawke sheegayo qiimiyiisu uu libinlaabmi jirey oo shakhsiyadiisa iyo codkiisa iyo aftanimadiisa ayaa barnaamijka u yeeli jirtey qiime ka badan kuu barnaamijku leeyahay.
Ehlu Janno ayuu ahaa Axmad Xasan Cawke, waayo waxa Raali Ka Noqdey dad 10 malyuun kor u dhaafay oo umad Muslim ah oo Ilaahey ducadooda ka aqbalayo.
Ilaahey Ha U naxariisto Axmad Xasan cawke, Inagana ha Inooga daba naxariisto. Aamiin